Izindaba - Umshini Wokubumba Omusha Wango-2022 we-LH-BM1000L Izendlalelo ezi-3 we-IBC Tank Blow Molding
I-LH-BM1000L 3 Layers I-IBC Tank Blow Molding Machine ingaphephetha izendlalelo ezingu-1-3 zamathangi e-IBC, afaneleka kakhulu izinhlobo ezihlukahlukene zemikhiqizo yokubumba igalelo, njengemiphongolo yamakhemikhali ehlukahlukene, amathangi e-IBC, imiphongolo yepulasitiki ye-IBC, njll. Imikhiqizo yepulasitiki, ukusebenza kahle komkhiqizo ophezulu, ukubumba igalelo elisheshayo, uhlelo oluzinzile nokonga amandla okungama-40%.
LH-BM1000L 3 Izendlalelo I-IBC Tank Blow Molding Machine Isingeniso
I-LH-BM1000L 3 Layers I-IBC Tank Blow Molding Machine iyithuluzi lesimanje lokugcina.I-container ye-IBC ton barrel ihlukaniswe izingxenye ezimbili: isitsha sangaphakathi kanye nohlaka lwensimbi.Umshini wokubumba we-ton barrel blow uphephetha ikakhulukazi isiqukathi sangaphakathi se-IBC.
I-LH-BM1000L 3 Izendlalelo Umshini Wokubumba I-IBC Tank Blow uvame ukusetshenziswa emigqeni yokukhiqiza ye-IBC yethoni emikhulu, enesivinini esikhulu kanye nekhiqizayo ephezulu, futhi kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ezingavuthwa.Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokubumba i-IBC, imikhiqizo yokubumba i-blow ihlale ilungiswa.Ngemuva kwalokho, kutholwa umkhiqizo owenziwe ngegalelo elingenalutho.
LH-BM1000L 3 Izendlalelo I-IBC Tank Blow Molding Machine isakhiwo kanye nomgomo wokusebenza
Umshini wokubumba we-JK-IBC-3IBC ton barrel blow wokugcwalisa i-thermoplastic parison ethambile ukuze ulenze linamathele eduze kobuso besikhunta.Ngemva kokufuthwa umoya, isonto liyajiya libe umphongolo ogobhozayo obumba umphongolo wethani.
Isakhiwo se-LH-BM1000L 3 Layers IBC Tank Blow Molding Machine sihlanganisa: isikulufu, ukufa, kanye nesikhunta.Isikulufu sihlukaniswe sibe yi-single-screw kanye ne-twin-screw..
Izikulufu eziningi zishayelwa amamotho, futhi isivinini se-screw silawulwa yi-converter frequency.Kukhona ikhoyili yokushisisa ngaphandle kwesikulufu sokuncibilikisa ipulasitiki.Ngokusho kwezindawo ezincibilikayo ezihlukene zepulasitiki ngayinye, kukhona isibonisi sokusebenza kwezinga lokushisa lapho uklama ikhoyili yokufudumeza.Uma izinga lokushisa lidlula Uma liphezulu kakhulu noma liphansi kakhulu, isikulufu sizoma ngokuzenzakalelayo bese sihlaba umkhosi.
Umsebenzi oyinhloko we-die ukuncibilikisa ipulasitiki.Ngemuva kokuthi ipulasitiki isincibilikisiwe ngokulinganayo, i-die isetshenziselwa ukukhipha imishini yokubumba engenalutho.Idizayini yokufa izothinta ukufana kokuqina kwepharishi lepulasitiki, ngakho-ke ukwakheka kwefasi kubaluleke kakhulu.
Isikhunta sivamise ukuphephethwa evalweni bese siyavalwa.Ukugeleza komsebenzi kwesikhunta okujwayelekile yilokhu: ukudluliswa kwesikhunta - ukucisha isikhunta - ukucisha isikhunta - ukucindezela - ukuvuthela - khipha - ukukhipha ingcindezi - ukuvulwa kwesikhunta - ukudluliswa kwesikhunta, Bese uya kumjikelezo olandelayo.